🥇 Ugcino lweebhiliyoni ezisetyenziswayo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 579
Ugcino lweebhiliyoni ezisetyenziswayo
Ividiyo yokuphicothwa kweemali ezisetyenziswayo
Cwangcisa ubalo mali lwezinto ezisetyenziswayo
Ukwenza i-akhawunti yamatyala asetyenziswayo akunakwenza ngaphandle kwesoftware ezenzekelayo, kuthathelwa ingqalelo ubungakanani bomsebenzi kunye nenani lababhalisi, indawo yeenkonzo ezinikezelweyo kunye nolawulo kuzo. Ubalo lwamatyala osetyenziso kumbutho wabanini bepropathi yinxalenye yobomi bomhlali ngamnye, kuthathelwa ingqalelo ubonelelo lwezixhobo lwenyanga. “Kutheni le nto ndifuna isoftware yobalo, kuba bakhona abasebenzi?” - usenokubuza. Isizathu kukuba ulawulo kunye nokwenza ingxelo akusoloko kwenziwa ngokuchanekileyo kwaye ngexesha xa usebenzisa iindlela zemveli zolawulo, kuthathelwa ingqalelo imeko yomntu, umthamo womsebenzi kunye nezinye izinto ezinxulumene nomsebenzi. Kungenxa yoko le nto umntu kufuneka athathele ingqalelo ezinye iindlela zokwenza inkqubo isebenze njengewotshi. Sithetha ngeenkqubo ezizodwa zokunikwa kwengxelo zamatyala asetyenziswayo, anakho ukwenza ukusebenza ngokugqibeleleyo! Yonke imihla, yonke ipropathi yokuhlala (indlu, indlu, indawo yabucala okanye yoluntu) isebenzisa zonke iintlobo zezinto eziluncedo, ezibalwa ngokwezixhobo zombane okanye ngaphandle kwazo, ngokusekwa komgangatho omiselweyo. Rhoqo ngenyanga, abasebenzi bezixhobo zikarhulumente kufuneka benze ukubala, ukubala kwakhona, ukulawula, ukubalwa kwemali, ukulungiswa, ukurekhodwa nokulungiswa kwamaxwebhu. Zininzi izinto ekufuneka zenziwe ngabasebenzi kangangokuba zihlala zisebenza kakhulu kwaye baziva benestres. Oku akwamkelekanga, kuba abasebenzi kufuneka bazive bekhululekile xa besenza imisebenzi yabo. Ngaphandle koko, oku kuya kuchaphazela umgangatho womsebenzi wabo kunye nefuthe elibi kwindlela abanxibelelana ngayo nabaxumi.
Ke ngoko, imfuno yenkqubo ezenzekelayo yokunikwa kwengxelo yamatyala ayisathandabuzeki, ngenxa yokubaluleka, ukusebenza ngokukuko, umgangatho kunye nexesha elimiselweyo lomsebenzi. Ayinamsebenzi kubasebenzisi ukuba yeyiphi inkqubo yobalo esetyenzisiweyo, eyona nto ibalulekileyo kukufumana inkonzo esemgangathweni. Kumashishini nakubasebenzi, ukubaluleka kokusebenzisa isoftware yobalo esemgangathweni ikwindawo yokuqala, kuba ngoncedo lwento eluncedo, imisebenzi yomsebenzi iyazenzekelayo kwaye iiyure zomsebenzi zilungisiwe, ngokusebenza komgangatho ophezulu kwemisebenzi. Enye yeenkqubo eziphambili zokunikwa kwengxelo zeebhili ezisetyenziswayo kwintengiso yi-USU-Soft, eyenza umsebenzi wokusebenza ukhululeke ngakumbi, ngokukhawuleza nangcono. Iindleko zoncedo ziya kukwenza wonwabe kwaye uqiniseke ukuba awuyi kubetha ipokotho yakho, edla ngokubonakala xa uthenga iinkqubo ezifanayo zokukhupha iibhili. Isoftware yobalo lwamatyala eluncedo asusa iimpazamo kunye nokudideka ngokubala ngobuhlakani kunye nokuhlela izinto, ukubonelela ngesakhono sokufumana ngokukhawuleza ulwazi olufunekayo olunokugcinwa kwiserver iminyaka emininzi ngaphandle kokutshintsha iimpawu kunye nolwazi oluqulathiweyo.
Ungalibala malunga nexesha elifanelekileyo lamatyala kunye neerisithi, amatyala alahlekileyo kumbutho wabanini bepropathi kunye neempazamo kubantu abatyalayo, kuba inkqubo yobalo yemali ethatha lonke ulawulo, isebenza ngamaxwebhu, iifom, amanani kunye nababhalisi bebonke, ukulawula ukufundwa kwezixhobo zokulinganisa kunye nokusebenzisa iifomula ezichaziweyo. Yonke into yenziwe ngumatshini, elawula zonke iinkqubo. Isoftware yobalo yamatyala asetyenziswayo, ngenxa yokuguquguquka nokusebenza kuwo onke amacandelo omsebenzi, ikwanika abasebenzisi ingxelo yobalo lwamatyala asetyenziswayo kwimibutho yabanini bepropathi, eyenziwa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo, idityaniswa nezixhobo ezahlukeneyo kunye neenkqubo, ezibonelela ithuba lokonga imali ekuthengeni iinkqubo ezongezelelekileyo zokunikwa kwengxelo.
Kwakhona kunokwenzeka ukugcina ixesha ekugcwaliseni iifom ezifanayo. Iifom, iingxelo kunye namaxwebhu alungiselelwe ukungeniswa kumacandelo ahlukeneyo, kubandakanya neekomiti zerhafu. Into eluncedo kwindalo iphela ibonelela abanini ngonxibelelwano olulula lomsebenzisi ekulula ukulufunda kwaye olungathathi ixesha elininzi lokuyazi. Uyilo alumi ndawonye. Unokukhetha isitayile osifunayo ngokuzama imixholo eyahlukeneyo kuluhlu. Umboniso omfutshane wevidiyo ubonelelwe apha njengekhonkco. Lonke useto lwesimo luyatshintshwa luhlengahlengiswe buqu kumsebenzisi ngamnye. Ngexesha lobhaliso, abasebenzisi banikwa igama lokungena kunye negama lokugqitha, banikezela ngamalungelo athile okusetyenziswa, aboniswe yimisebenzi yokusebenza. Ukufakwa kwedatha ngokuzenzekelayo kunciphisa iimpazamo okanye iimpazamo, kunye nokungeniswa okuvela kwiindidi ezahlukeneyo zeefayile, ezikhulula ixesha labasebenzi, ukuqinisekisa ukuchaneka kunye nokwenza lula. Isakhono sokusebenza ngeefomathi ezahlukeneyo sikwenza lula imisebenzi yenkampani, ehlala isebenza ngokutshintshiselana ngamaxwebhu olwazi. Inkqubo yokubhalwa kwemali yamatyala asetyenziswayo ikuvumela ukuba ujonge rhoqo iinkqubo zemveliso, ukubonelela ngolawulo ngolwazi oluyimfuneko ngohlobo lweengxelo kunye neeshedyuli, kunye nokulandela umkhondo wokuhamba kwemali kwizigodo ezizezinye ezikwi-desktop.
Ukwenza i-akhawunti malunga nokusetyenziswa kwemali kwimibutho yabanini bepropathi kwenziwa kusetyenziswa isisombululo setekhnoloji yale mihla ehambisa ufundo kwinethiwekhi yendawo okanye kwi-Intanethi. Ubuninzi okanye ukuthunyelwa kweerisithi kunye nemiyalezo kuyasetyenziswa, kunye nokubonelelwa kokufundwa ngokuchanekileyo, abanokuthi abasebenzisi bazimele ngokuzimeleyo kwisiza, ukuseta ukufundwa okukhoyo kunye nokubukela ngeerhafu kunye neefomula. Ke, ukuyondelelana kunye nokuchaneka kuya kususa isimo sengqondo esibi kunye nokungathembeki, kwaye nomsebenzi wabasebenzi uya kuncipha. Inkqubo yamatyala ingenziwa ngekheshi okanye ngokudlulisela imali kwiakhawunti yangoku yenkampani eluncedo.
accounting kwinkampani esetyenziswayo
accounting kwiinkampani zolawulo lwasekhaya
ukunika ingxelo kubaboneleli
ubalo lweshishini lokusetyenziswa
Ukwenza ingxelo ngomsele wamanzi
uphicotho lwezinto ezisetyenziswayo eluntwini
uphicotho lwezinto ezongezelekayo eluntwini
ubalo lwamandla ombane
accounting yokukhupha inkunkuma
ubalo lwezixhobo zemeta nganye
ukubalwa kwemali yokufunda ngemitha
ubalo lweentlawulo zeenkonzo zoluntu
ubalo lobalo lwezinto ezisetyenziswayo
ubalo lweenkonzo zonikezelo lwamanzi
Intlawulo yokubalwa kwemali kwindlu
intlawulo yobalo lwamatyala eenkonzo ezisetyenziswayo
Inkqubo yocwangciso-zincwadi zeenkonzo zoluntu
ukunyanzeliswa zixhobo zemeta
izongezelelo zoncedo lwamanzi
ukunyanzelwa kwezinto ezisetyenziswayo
ukwandiswa kwezindlu kunye neenkonzo zoluntu
ukunyanzeliswa kwentlawulo yokufudumeza
isityholo sokuhlawulwa kwamanzi
ukwandiswa kwezohlwayo ngezixhobo
ukunyanzeliswa kwemali yokusebenzisa
intlawulo eyongeziweyo yezixhobo
indawo yokubalwa kwemali
i-automation ye-accounting yezixhobo
into ezenzekelayo yomsele wamanzi
Ukubalwa kweenkonzo zebandla
Ukubalwa kwezohlwayo zentlawulo yoluntu
Ukubalwa kwezohlwayo zeenkonzo
Ukubala ubalo lwezindlu kunye neenkonzo zoluntu
Ukubalwa kweentlawulo zenkonzo
Ukubanda kokusetyenziswa kwamanzi okubandayo
Inkqubo yokuhlangana kombane
Inkqubo yemitha yombane
Inkqubo yokubala ubushushu
Ubushushu ubonelelo lobalo
Ukufikelwa kwamanzi ashushu
Inkqubo yezindlu kunye neyokuhlangana
Ulawulo lweshishini lokusebenzisa
Ukubalwa kweentlawulo kubalo lweenkonzo zoluntu
Inkqubo yentlawulo yeenkonzo ezihlanganyelweyo
Intlawulo kunye nokuqokelelwa kweenkonzo zoluntu
Ukubala ukubalwa kweenkonzo zesebe
Ukuprinta irisithi ngebhakhowudi
Iirisithi zokuprinta zentlawulo
Inkqubo yokuphicothwa kweentlawulo zenkonzo
Inkqubo yokuphicothwa kwemali eyongezelekileyo
Inkqubo yokuphicothwa kwezixhobo zemitha
Inkqubo yokuqokelelwa kweenkonzo zoluntu
Inkqubo yenkampani yokusebenzisa
Inkqubo yokubala ukufumana
Inkqubo yokubala iinkonzo zoluntu
Inkqubo yokubala iintlawulo zokusetyenziswa
Inkqubo yenkunkuma yoluntu
Inkqubo yenkampani yokunxibelelana emnyango
Inkqubo yokuzalisa iirisithi
Inkqubo yokufumana iirisithi
Inkqubo yokuqokelelwa kwenkunkuma
Inkqubo yeenkampani zolawulo lwasekhaya
Inkqubo yokubonelela nge-intanethi
Inkqubo yezixhobo zemitha
Inkqubo yokuhlawula izinto ezisetyenziswayo
Inkqubo yabantu accounting
Inkqubo yokunikezelwa kombane
Inkqubo yezinto ezisetyenziselwa uluntu
Inkqubo yomboneleli ngetayile yeTV
Inkqubo yenkampani yegesi
Inkqubo yeshishini lokusebenzisa
Inkqubo yombutho ojolise kuyo
Inkqubo yomsele wamanzi
Inkqubo yezinto ezongezelekileyo
Inkqubo yokuhlawulwa kwenkonzo
Inkqubo yokucocwa kwamanzi
Inkqubo yokuhlawula indawo yokuhlala
Ulawulo lwendlu yokuhlala
Uxwebhu olunye lokuhlawulela izixhobo
Inkqubo kwizixhobo zoluntu
Inkqubo yeenkonzo zoluntu
Inkqubo emanyeneyo yentlawulo yokusetyenziswa
Izinto zokubala zokubala
Umsebenzi wokubalwa kwemali
Ukusetyenziswa kwezinto ezisetyenziselwa amagumbi
Inkqubo yentlawulo yokusetyenziswa
Ukunikwa kwengxelo yokunikezelwa kwamanzi
Ukuhambisa amanzi ngokuzenzekelayo